Wese munhu anotengesa kuAmazon. Asi havazi vese vanochera kutenderera uye vane mutambo nezvose zvakavanzika zvesaiti uye zvishandiso.
Kubva kuimba yekuratidzira iyo inokutendera iwe kusanganisa uye kuenzanisa fenicha iwe yaunoda kutenga, kune emadhijitari makuponi iwe aunogona kutema, kune akawanda matipi ezvakavanzika matipi uye matipi atakawana anogona kukuchengetedza mari uye nekuchinja zvachose mashandisiro aunoita Amazon.
Akanakisa Amazon matipi uye manomano
Zvinonzwa kupusa kutanga neizvi, nekuti zviri pachena, asi iwe unofanirwa kujoina Amazon Prime kana iwe uchida kugona Amazon. Chunk hombe yemazano uye manomano atinokurudzira pazasi anoshanda chete kana uri nhengo. Iko kubhadhara kwakabhadharwa uko, kwemari yegore kana yemwedzi, inopa mukana kune akati wandei eAmazon services uye zvinowedzera. Inowanikwa kutenderera pasirese ye $ 12.99 pamwedzi kana $ 119 pagore.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Amazon Prime.
Zvikuru kuderedzwa kweEBT uye Medicaid makadhi makadhi
Kana iwe uchida kuve nhengo yeAmazon Prime uye uine EBT inoshanda kana kadhi reMedicaid kuUS, unogona kujoina pamutengo wakadzikiswa we $ 5.99 pamwedzi, pane kuita $ 12.99 pamwedzi. Kana iwe uchikodzera, unogona Joinha kubva pano.
Prime discounts yevadzidzi
Kana iwe uchida kuve nhengo yeAmazon Prime uye wakanyoreswa kukoreji kana kuyunivhesiti ,joinha Prime Mudzidzi. Sewe nhengo, iwe unowana yemwedzi wechitanhatu yemahara kuyedzwa iyo inosanganisira zvinotevera zvinhu zvemahara kwemazuva maviri kutumira pane zvakakodzera kutenga, Prime Vhidhiyo, uye yevadzidzi-chete zvinopihwa uye zvidzikiso. Kamwe kutongwa kwako kwapera, unogona kusaina kuAmazon Prime pa50 muzana kubva. Izvi zvichave zvinoshanda kwemakore mana kana kusvika iwe wapedza kudzidza
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Prime Mudzidzi.
Goverana nhengo yako yepamusoro
Amazon inokutendera iwe kuwedzera anosvika vamwe vanhu vana kune yako Prime account kuti vagone kugovera yako yekutumira mabhenefiti, asi ivo vanofanirwa kuve nhengo dzemhuri yako. Kuti umise iyo, enda kune iyo Amazon Mhuri Webhusaiti uye tinya Wedzera Adult / Teen / Child. Iwe unozoda yavo email kero inoshandiswa pane avo maAmazon account. Maitiro acho anodawo vakuru kuti vagovane ruzivo rwechikwereti kana kiredhiti kadhi.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve kugovana nhengo yako yepamusoro.
Chikamu cheHurumende, Amazon Teen inopa vana vane makore 13 kusvika ku17 rusununguko rwekutenga, asi vabereki vanogona kubvumidza zvavanotenga zvisati zvabhadhariswa.
Unoda kuongorora zviri nyore kwazvo zvinhu zvakadzikira paAmazon? Buda Amazon Outlet. Inonyanya kuunganidza zvakawandisa uye zvekubvisa zvinhu zviri kutengeswa kuAmazon, asi pamatanho ese aunogona kufungidzira. Aya madhiri anogona kukusevhesa iwe kusvika ku80 muzana!
Enda pano kuti uone Amazon Outlet.
Imba yekuchengetera yeAmazon
Imba yekuchengetera yeAmazon yakafanana neAmazon Outlet, asi inoratidza kuderedzwa kukuru pane yakavhurika-bhokisi uye zvigadzirwa zvakagadziriswazve - zvakanyanya tech nemidziyo. Ramba uchifunga zvinhu izvi zvinogona kushandiswa, kuvhurwa, kana kukuvara. Asi zvinhu zvese zvakanyorwa nemhando, zvinosanganisira zvakanaka kwazvo, zvinogamuchirwa, uye senge nyowani.
Enda pano kuti uone Amazon Warehouse.
Amazon Mhuri inzvimbo yenhengo dzeParamende. Inobata pazvinhu zvemumba nezvevabereki. Asi zvakare inopa zera-rakavakirwa chigadzirwa kurudziro uye wenguva dzose kutengesa pane zvigadzirwa zvevana. Iwe unowana makumi maviri muzana kubva pakubhadharisa manapukeni uye gumi muzana kubva pazvinhu zvakasara zvevacheche zvinhu.
Enda pano kuti uone Amazon Mhuri.
Tsvaga madhiri kuAmazon
Madhiri eAmazon akanakisa ezvigadzirwa zvitsva anowanikwa mu "Yemazuva Ano Deals" chinongedzo pamusoro chero peji reAmazon. Chikamu "Goridhe Bhokisi Rekutengesa kwezuva" rine madhiri matsva mazuva ese, pamwe ne "Mheni Inobata", Iyo iri shoma nguva uye dzimwe nguva inopera mumaminetsi. Kuti ugare pamusoro pezvose, shandisa App yeAmazon, kwaunogona kuona madhiri mazhinji maawa makumi maviri nemasere pamberi uye kusaina kuzivisa.
Unogona kunyange kurega madhiri auye kwauri kuburikidza nemaAmazon ezuva nezuva anotengesa email.
Tarisa zvibvumirano paAmazon
Paunoona madhiri aunoda, tinya Tarisa chibvumirano ichi kuti uvachengetedze. Wobva waenda pano kuona madhiri urikutarisa.
Tevera uye uchienzanisa mitengo
Bhukumaka iyi yemutengo tracker saiti. Camel-amelc.com monitors chinenge chero chigadzirwa paAmazon, chinogona kukuratidza izvo zvakanyanya kuderedzwa pane chero zuva rakapihwa, kukuratidza iwo mutengo wemitengo yezvakanyorwa, uye nekukuzivisa iwe kana mutengo uchidonha pazvinhu zvaunoda.
Edza zvakare saiti MutengoGrabber kana kuwedzera MutengoBlink, zvese zviri zviviri zvinoita kuti iwe ukurumidze kutarisa kuti uone kana chinhu chakachipa kumwe kunhu.
Kune zvakare WikiBuy, saiti uye ekisitenjeni. Izvo zvinokutendera iwe kuti uwane mari kumashure, shandisa promo kodhi, uye tarisa zvinhu zvekuenda kunotengesa.
OnlinePriceAlert ndichakutumira email kana chinhu chaunoda chikarova imwe poindi yemutengo iwe yaunoda kubhadhara.
Amazon inoshandira kumusoro coupons. Pano pane chikamu chakazara paAmazon icho chakatsaurirwa kumakoponi. Iwe unogona kuwana coupon emagetsi, zvekushandisa pet, matoyi, uye zvimwe zvinhu. Hapana chigero kana maponi epanyama anodikanwa. Kuti utange neAmazon coupon, enda kuAmazon.com, wobva wadzvanya pane iyi link iripamusoro ye "Nhasi MaDhiri." Mune menyu yezvinhu zvidiki, tinya pane "Coupons."
Enda pano kuti uone maAmazon Coupons.
Tsvaga promo kodhi
Isu tambotaura Wikibuy seyekubvisa kodhi aggregator yekuwedzera iwe unofanirwa kuedza, asi imwe nzira kune iyoyo Mudiwa. Izvo zvinongoerekana zvawana ako makuponi uye wozvishandisa pakubuda. Ingo isa yekuwedzera uye ichaita zvese.
Nyorera uye Chengeta
Pazvinhu zvakawanda zvemumba ne grocery, Amazon inokupa sarudzo ye "kunyorera" uye inopa mutengo wakadzikiswa kana ukadaro. Ichi chikamu chevatengesi Nyorera uye Chengeta chirongwa, kwaunogashira nguva dzose kutumirwa kwechinhu icho kusvika pamazana gumi muzana kubva pamutengo wenguva dzose.
Enda pano kuti udzidze zvimwe zvakawanda.
Chinja yakasununguka shanduko kuita makadhi echipo mahara
Iwe unogona kuwedzera mari yemari muhomwe yako kuAmazon kadhi rechipo uchishandisa Costar kiosk. Iyo yemahara yemahara, ichizungunusa iyo 11.9 muzana muzana yechaji yebasa inowanzo kuve yakabatana nekutsinhana kwemari. Sarudza kadhi rechipo reAmazon kuti usvetuke muripo uye ugamuchire eGift Kadhi kodhi iwe yaunogona kushandisa ipapo ipapo.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezveCoinstar.
Gamuchira mahara maAmazon Chipo Makadhi
Kune mizhinji mibayiro uye nzvimbo dzekuongorora dzinokutendera kuti uite mabasa epamhepo kuti uwane mapoinzi anonunurwa kumakadhi echipo eAmazon Semuenzaniso, pane Swagbucks, iyo yakasununguka kujoina uye inoita kuti iwe uzadzise ongororo kuti uwane mapoinzi. Kune zvakare MyPoints uye ndinoti.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Amazon Chipo Makadhi.
Amazon Mubatsiri ndiko kuwedzera kweChannel, Firefox, Internet Explorer, Safari, uye Microsoft Edge. Zviri mahara uye zviri nyore kuisa. Nayo, unogona kutarisa zvigadzirwa zvekufananidza izvo zvinochengetedza nguva nemari, kuwana mapfupi ekushambadzira kune akakurumbira mahabhu eAmazon chaimo mubrowser yako, uye nekuziviswa kana madhiri auri kutarisa achienda kunogara nemazita edesktop. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti uwane ruzivo nezve maodha uye kuendesa.
Zvirongwa zvemwedzi nemwedzi zvekubhadhara pazvinhu
Amazon inoita kuti ubhadhare zvimwe zvinhu kwemwedzi yakati wandei. Ichi chipo chinongoshanda chete kune zvigadzirwa zvinotengeswa uye zvinotumirwa neAmazon.com, senge iyo Amazon Echo, asi zvakare yechitatu-bato zvigadzirwa kubva kune vamwe vatengesi. Ingo tsvaga iyo "yemwedzi kubhadhara" sarudzo pane chigadzirwa ruzivo peji.
Enda pano kuti uone zvinhu zvepamwedzi zvekubhadhara-zvinokodzera.
Verenga iyo yakadhindwa yakadhindwa pamarongero emwedzi ekubhadhara pano.
Iwe unogona kutengesa mumidziyo yako yekare, kusanganisira mafoni, mapiritsi, makamera, uye nezvimwe, pamwe nemitambo yemavhidhiyo, mabhuku ekare, uye mabhuku, mukuchinjana kadhi rechipo reAmazon. Zvinhu zvacho zvinofanirwa kunge zviri mumamiriro akanaka uye iko kutumirwa kwakatosanganisirwa!
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve trade-ins.
Unoda kupa zvishoma kune rubatsiro iwe uchitenga? Wobva washandisa AmazonSmile. Kutanga, bhukumaki smile.amazon.com, uye uve nechokwadi chekugara uchitenga kubva ipapo. Pa desktop, unogona kushandisa iyo AmazonSmile 1Button yeChannel or Amazon Smile! yeFirefox browser ekuwedzera kuti ayeuchidzwe kushandisa Smile. Wobva watora charity - inodarika miriyoni iripo - uye kana iwe ukatenga zvigadzirwa zvinokodzera, 0.5 muzana ichaenda kune yako yerudo.
Tenga ne Alexa
Uchishandisa Amazon Alexa kuburikidza neAmazon Echo mutauri kana iyo huru Amazon app, unogona odha kana kuodha zvekare chero zvinhu. Ingoti "Alexa, odha [zita rezvigadzirwa]." Ive neshuwa yekumisikidza yekusimbisa kodhi mune yako Alexa app kudzivirira netsaona mirairo. Unogona zvakare kushandisa Alexa hunyanzvi hwekutenga kutarisa zvibvumirano kune vamwe vatengesi. Zvakare, gara wakatarisira mamwe maAki-chete madhiri mwaka wezororo.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve kutenga izwi.
Amazon Cash (kana Kumusoro Kumusoro)
Amazon Cash inoita kuti iwe uwedzere mari kuamu account yako yeAmazon. Izvo zvinonyanya kukubvumidza iwe kuisa mari kune yako Amazon account account kuti iwe ugone kupedzisira uine mari yekushandisa kuAmazon pasina kadhi rekubhangi kana kadhi yechipo yakasungirirwa. Enda pano kuti utange.
MuUK, sevhisi iyi inonzi Top Up. Enda pano kuti udzidze zvakawanda.
Checkout uye kuendesa
Zuva rimwe chete kana awa-imwe kuendesa
Mumaguta anodarika zviuru zvisere, nhengo dzeMakurukota dzinogona kuwana kutakura kwezuva rimwe chete pane akakodzera mirairo inodarika $ 35. Raira masikati, uye pasuru yako ichaendeswa na9pm (mazuva manomwe pavhiki). Kana iwe ukaraira manheru, iwe unozowana mahara-zuva rimwe rekutumirwa. Enda pano kuti uone kana uchikodzera. Kune zvakare Amazon Prime Zvino, iyo inopa kuendesa mune imwe chete kana maviri maawa. Pinda yako ZIP kodhi kuti uone kana iyi sarudzo iwe uchiwana.
Kunonoka kuendesa kudzorera
Kana iwe ukatenga chimwe chinhu chinokodzera kutumirwa mahara nePrime, asi zvikasasvika nenguva, unogona kuwana kuwedzerwa kwemwedzi mumwe wehunhengo hwako. Kana iwe usina Prime, Amazon ichadzosera mari yekutumira. Kuti ubvunze, enda ku Bata Amazon > sarudza "Rairo Yandakaisa"> sarudza odha yako> sarudza Dambudziko neodha> Kutumira kana kuendesa nyaya> Kutumira kunonoka.
Nhengo dzese dzePrimary dzinofanirwa kuona nyowani yeAmazon Day sarudzo kana ivo vobuda uye vatora yavo yekutumira sarudzo. Pfungwa ndeyekuti, vanogona kuseta chero zuva revhiki sezuva ravo rekutakura. Saka, kana ukasarudza Chishanu, zvinhu zvese zvawakatenga mukati mevhiki zvinosvika pane yako yakatarwa "Amazon Day", kana Chishanu. Zuva iro rinenge riri rako rekutadza kunze kwekunge iwe uchinja iro pakubuda. Kununurwa kwevhiki kwevhiki kunowanikwa mune dzimwe nzvimbo.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezveAmazon Day.
Kana iwe uine nzvimbo padhuze newe neimwe, sarudza Amazon Kukiya yekutora (kana kudzoka) pakubuda. Aya akachengeteka, ekuzvishandira-kiosks. Kune anopfuura zviuru mazana maviri nemazana matanhatu makaki ari mukati memakumi manomwe+ maguta eUS. Uchavawana kunzvimbo senge Zvese Zvekudya Misika uye zvitoro zviri nyore.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Amazon Locker.
Imwe nzira kuAmazon Locker ndeye Amazon Key, iyo inobvumira kuendesa vanhu kuti vapinde mumotokari yako, garaji, kana kumba kana uchidonhedza mapakeji.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Amazon Key.
Makadhi, mibairo, uye mapoinzi
Kutenga nemubairo mapoinzi
Amazon inopa makadhi mashoma ayo anoita kuti iwe uwane mibairo mapoinzi. Iwe unogona kudzikunura aya mapoinzi emakadhi echipo (kana semari kudzoka kuburikidza neChase). Asi mapoinzi haashande kune zvinhu zvakaita sekurodha pasi kwedhijitari uye kumwe kunyoreswa uye zvinhu zvekutengesa. Iwe unogona zvakare kubatanidza mamwe makadhi echikwereti - akadai seAmerican Express, Discover, Citi, nezvimwe - kuakaundi yako yeAmazon uye Tenga Nemapoinzi.
Ongorora Amazon.com Makomborero Visa Kadhi kubva Chase iyo inogona kushandiswa chero kupi uye kutora mapoinzi. Kana iwe uri nhengo yepamusoro muUS, iwe unowana mapoinzi mashanu padhora rakashandiswa paAmazon uye Zvese Zvekudya; maviri pamadhora mumaresitorendi, zvitoro zvemishonga, uye magasi; uye rimwe chete padhora pane zvimwe zvese zvinotengwa. Mazana zana mapoinzi anokuwanira iwe dhora rimwe raunoshandisa kuAmazon Woo!
Panewo Chitoro cheAmazon, inova yekutenga kuAmazon pamitengo yakatarwa. Nhengo dzeUnited States dzinowana zvikamu zvishanu kubva muzana kana dzatenga zvinhu zvinokodzera zvePrimary chete. Kana iwe uchikodzera, iwe unowana iyo $ 5 yechipo kadhi paunosaina.
Amazon Kiredhiti Builder
Amazon yakabatana neSynchrony Financial kuvhura Amazon Kiredhiti Builder kuitira kuti ikwanise kukweretesa vatengi veUS vane yakaipa kiredhiti kana vasina nhoroondo yechikwereti. Inosanganisira kadhi ine 5 muzana mari kumashure pakutenga. Inopawo matipi ekuvaka chikwereti. Kutanga, Synchrony irikupa izvo zvinozivikanwa se "zvakachengetedzwa" makadhi echikwereti - uko vanhu vanogona kuisa $ 200, semuenzaniso, uye vane madhora mazana maviri emadhora echikwereti.
Kana iwe ukasatenderwa kadhi rechikwereti reAmazon, iwe unozokurudzirwa kunyorera. Asi iyo nyowani kadhi kunyorera iripowo padhuze nemamwe maAmazon makadhi. Kuti ushandise zvakananga, enda ku Nyorera Amazon Wakavaka Kiredhiti > tinya Nyorera Izvozvi> uye uteedzere pa - screen rairo.
Kwete-kumhanyisa kutumira zvikwereti
Nhengo dzePrimary dzinogona kuwana chimwe chinhu chinowedzera kana ivo vakasarudza yemahara kwete-yekumhanyisa kutumira pakutenga (panzvimbo yesarudzo yemazuva maviri). Yako pasuru inowanzo svika mukati memazuva mashanu, uye iwe unowana zvikwereti zvinoshandiswa kuaccount yako kuti ushandise pakutenga mune ramangwana.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve kwete-kukurumidza kutumira.
Zvishandiso zvakasiyana uye maficha
Amazon has yakatanga chikamu chitsva chesaiti yayo. Inoita kunge imba yekutenga yemhando yemhando, ichiyeuchidza QVC kana HSN. Kubva pane zvatinogona kutaura, saiti inoshandiswa kusimudzira zvigadzirwa paAmazon.com. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve chimwe chinhu, tinokurudzira kutarisa kuAmazon Live.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezveAmazon Live.
Amazon AR Wona
App yeAmazon inopa AR View chimiro. Inoita kuti iwe utarise kuburikidza nezviuru zvezvinhu zvakanyorwa paAmazon - zvinhu zvakaita sekushongedza imba, zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemuhofisi, matoyi nemitambo - uye uzviise mumba mako kana chero kwaunoda kuzviona. Uchishandisa chimiro, iwe unogona kufukidza, kushandura saizi, uye kutenderera chinhu kuti uone kuti chinotaridzika sei uye chakaringana muhupenyu chaihwo. Iko kusununguka kushandisa, zvakare.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve AR View.
Imba yekuratidzira yeAmazon
Showroom ndeimwe yemahara AR maficha muAmazon webhusaiti uye app iyo inoita kuti iwe uise fenicha zvinhu mune chaiyo imba uye uone kuti zvinokwana sei pamwechete. Iwe unogona kugadzirisa kutaridzika kwepasi uye madziro kuti uoneke yako yekutandarira imba uye nekungochinja zvinhu. Zvinhu zvechitatu-bato zvinosanganisira masofa, macheya, matafura, marambi, rugs, uye hunyanzvi. Iwe unogona zvakare kuyedza maAmazon chairo Rivet uye Matombo uye Beam mhando.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Showroom.
Rangarira Echo Tarisa? Iyo ndeimwe yeAmazon mashoma-anozivikanwa Echo zvishandiso. Chinangwa chayo chega kupa zvipfeko zvitsva kuti iwe utenge. Iyo inoshandisa "Style Tarisa sevhisi" iyo inosanganisa muchina kudzidza algorithms nezano kubva kune "mafashoni nyanzvi" kukupa iwe dhizaini zano. Zvino, Amazon ine chigadzirwa nyowani, chinonzi StyleSnap, iyo - seEcho Tarisa - inoshandisa AI kuita mafashoni kurudziro.
Iwe unongodzvanya pane kamera koni mukona yeiyo Alexa app uye tora pikicha yehembe yaungade kupfeka. Amazon inozopa zvinhu zvakafanana zvehembe. Uchishandisa yakadzika-yekufunda tekinoroji, StyleSnap inogona kuudza musiyano uripo, toti, flare rokwe kana chipfeko chekupfeka. Iyo ficha, iyo iyo Amazon yatitaurira iko zvino yave kurarama muiyo Alexa app yeIOS uye Android, ichatarisawo zvinhu zvakaita senge brand, mutengo, uye vatengi ongororo.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve StyleSnap.
Yese Chikafu mabhenefiti
Zvese Zvekudya izvozvi zvava neAmazon, uye saka iri Amazon Prime perk: Unogona kuwana gumi muzana pazvinhu, pamwe nezvimwe zvakabviswa vhiki nevhiki uye mabhenefiti senge kuendesa kwemaawa maviri kuburikidza nePrime Now uye zvikamu zvishanu muzana pakutenga kuburikidza neAmazon Prime Rewards Visa Kadhi. Dhawunirodha iyo Rose Foods Market app kuti utange kusevha. Zvakare, edza kubvunza Alexa, "Ndezvipi zvangu Zvese zvekudya zvinopa?"
AmazonFresh ndeyeAmazon's grocery kuendesa uye yekutora sevhisi mumaguta akasarudzwa. Nhengo dzePrimary dzinogona kuwana mabhenefiti eAmazonFresh yeimwezve yemwedzi yemitezo yemitezo yemitezo ye $ 14.99. Enda pano kuona kana kuendesa kana kutora kunowanikwa munzvimbo yako.
Enda pano kusaina kuAmazonFresh
Katsva Kudya kwekudya
Katsva Kudya kwekudya haina kufanana nemamwe emakiti ekudya. Kutanga, iwe unokwanisa kuraira mabiko kune mumwe, vaviri, kana vatanhatu vanhu. Vanodhura pakati pe $ 18 ne $ 20 yekudya kwevanhu vaviri. Mutengo wekushandira wakada kufanana nevakwikwidzi. Nekudaro, kuodha kit yekudya, iwe unofanirwa kuve nhengo yeAmazon Prime uye Amazon Nyowani. Iwe zvakare unofanirwa kugara munzvimbo inotsigirwa.
Enda pano kuti utsvage maAmazonFresh chikafu kits.
Amazon Twitch Prime mabhenefiti
Amazon-muridzi Twitch ikozvino inopa mabhenefiti chete kune Amazon Prime nhengo. Iyi seti nyowani yemabhenefiti inonzi Twitch Prime. Kuti uwane mukana kwazviri, iwe unofanirwa kubhadhara gore rega reAmazon Prime nhengo yembairo, asi iwe unowana kushambadzira-kwemahara uye kuderedzwa pane pre-odha nemitambo mitsva.
Zvakare, kupemberera Amazon Prime Day 2019, Twitch ichangobva kuziviswa Twitch Inotengesa Kunze, yemazuva maviri terevhizheni-yekutenga-chiteshi-chita chirongwa chine mutambo, zvemagetsi, uye zvimwe zvigadzirwa zvine hukama zviri kutengeswa panguva yePrime Day, yakaitirwa live nevamwe veTwitch 's makuru ekuyerera.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezveTwitch Prime.
Amazon Prime Book Bhokisi
Amazon inopa Prime Book Bhokisi, yepamwedzi yevana bhuku kunyorera sevhisi, kune Prime nhengo. Kana iwe ukanyorera, iwe uchagashira (unounzwa kumusuwo wako) bhokisi rine mabhuku mana ebhodhi kana maviri emabhuku akaomarara emifananidzo kana maanovel. Amazon yakati iwe uchachengetedza kusvika makumi mana muzana kubva pamutengo wemabhuku aya. Iyi sevhisi inodhura $ 40 pamwedzi.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Amazon's Prime Book Bhokisi.
Amazon Prime Wadhirobe
Amazon Prime Wardrobe inoita kuti uedze kupfeka usati watenga. ” Prime Wardrobe inoonekwa sechinhu chitsva kubatsirwa, saka nyorera kuAmazon Prime kuti utore mukana webasa. Ukangoita, iwe unokwanisa kuodha mbatya, shangu, uye zvekushandisa - pasina mubhadharo wepamberi - uye iwe unowana mazuva manomwe kuti uvaedze. Iwe unobva washandisa iyo yakapihwa chitambi kuvadzorera.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezve Prime Wardrobe.
Kudhindwa kwemifananidzo yeAmazon
Amazon ichadhinda mapikicha ako iwe! Kunyangwe iwe uchida makadhi, madziro ekushongedza, mugs, emabhuku mabhuku, makarenda, kana maprints. Zvese zvakadhindwa pabepa gobvu, mune rakapfuma ruvara, uye muUS. Zvirinani, isa odha yako kuburikidza neAmazon Prime, uye unozotumirwa mahara.
Enda pano kuti udzidze zvakawanda nezvekudhinda kwemifananidzo.
Yakanakisa Amazon Prime Day 2020 US zvakadzama uye madhiri
Mazhinji ekushambadzira masevhisi ari kupa emahara miedzo, saina izvozvi
Mashandisiro Ekushandisa PayPal paAmazon